အာကာသယာဉ် မှူး Wang Yaping သည်တရုတ် Lantern Festival ကို ကျင်းပရန် အာကာသ ထဲတွင် Guzheng ကစား သည် - Pandaily
အာကာသယာဉ် မှူး Wang Yaping သည်တရုတ် Lantern Festival ကို ကျင်းပရန် အာကာသ ထဲတွင် Guzheng ကစား သည်
Feb 16, 2022, 19:00ညနေ 2022/02/16 23:18:33 Pandaily
ကာလ2022 Lantern Festival တီဗီ ရှိုးအဂၤါေန႔ ညက အာကာသ ခရီးစဥ္မွာ ပါ၀င္ ေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ အာကာသ ယာဥ္ မွဴး Wang Yaping ဟာ Jasmine လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ သီခ်င္း တပုဒ္ ကို Guzheng နဲ႔ တီး ခတ္ ခဲ့ၿပီး အာကာသ စခန္း ကေန အားလပ္ ရက္ ဆုေတာင္း ေတြ ေပးပို႔ ခဲ့ပါတယ္။
ဤသည်မှာ တရုတ် အာကာသယာဉ် မှူး များသည် အာကာသ အတွင်း အကြီးစား တူရိယာ များကို ပထမဆုံးအကြိမ် တီးခတ် ခြင်းဖြစ်သည်။ မစ်ရှင် မတိုင်မီ အင်တာဗျူး တစ်ခုတွင် Wang Lihong က သူသည် မစ်ရှင် အတွင်း ပိုမို ကြီးမားသော တူရိယာ ကို ယူဆောင် လာပြီး တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုကို အာကာသ ထဲ တွင်ပြသ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ တော်တော်များ များက “ဒါက စကြာ ၀ fromာမှ တေးသံ သာ” ၊ “ဒီ တေးသံ များကို ကောင်းကင် ၌သာ ဖန်တီး နိုင်သည်” စသည့် မှတ် ချက်များ ကိုရေးသား ခဲ့ကြပြီး အခြား စပ်စု သော အင်တာနက် အသုံးပြု သူများက “မင်း အာကာသ ထဲကို ဘာတွေ ယူလာ တာလဲ” ဟု မေး ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် အာကာသယာဉ် မှူး Zhai Zhigang ၊ Wang Yaping နှင့် Ye Guangfu တို့သည် Shenzhou 13 အာကာသယာဉ် တွင် Tianhe ၏အဓိက ဆေးတောင့် ကိုအောင်မြင်စွာ ဝင်ရောက် နိုင်ခဲ့သည်။ ၎တို႔ ပထမ သက္တမ္း တြင္ ေျခာက္လ ၾကာ လမ္းေၾကာင္း ေပၚ၌ ရွိေန မည္ျဖစ္သည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Shenzhou 13 ယူနစ် သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဆေးတောင့် မှထွက်ခွာ ခဲ့ပြီး Wang Yaping သည်တရုတ်နိုင်ငံ ၏ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အာကာသယာဉ် မှူး ဖြစ်လာ သည်
တရုတ် လိုက်ပါ အာကာသ အေဂျင်စီ ၏အဆိုအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ညနေခင်း ၌ ပေကျင်း အချိန်တွင် Shenzhou 13 အာကာသယာဉ် မှူး များသည် ပထမဆုံးအကြိမ် လေယာဉ် မှထွက်ခွာ ခဲ့သည်။ အာကာသ ထဲသို့ ၀ င်ရောက် ပြီး တစ်လ မ ပြည့်မီ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် Wang Yaping သည် Shenzhou 13 အာကာသယာဉ် မှူး ၏ပထမဆုံး ဆေးတောင့် ကို ပြီးစီး ခဲ့ပြီး အာကာသ လမ်းလျှောက် ခြင်း ကိုပထမဆုံး ပြုလုပ်သော တရုတ် အမျိုးသမီး ဖြစ်လာသည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ တွင်တရုတ် နိုင်ငံသည် “တရုတ် အာကာသ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ လှုပ်ရှားမှု များဆိုင်ရာ အပြာရောင် စာအုပ်” ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ အာကာသ လွှတ်တင် ရေး လုပ်ငန်းများ သည်အဓိက အောင်မြင် မှုများ ကိုဆက်လက် ရရှိခဲ့သည်။ တစ်နှစ် ပတ်လုံး စုစုပေါင်း လွှတ်တင် ရေး မစ်ရှင် ၅၅ ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အာကာသယာဉ် အမျိုးအစား ၁၁၅ ခု ကိုစတင်ခဲ့သည်။ လွှတ်တင် လိုက်သော အာကာသယာဉ် ၏စုစုပေါင်း ဒြပ်ထု သည် စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၁ ၉၁. ၁၉ တန် အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၈၅. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
အပြာရောင် စာအုပ် က ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် China Aerospace သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ကော်ပို ရေး ရှ င်းသည် အာကာသ လွှတ်တင် ရေး မစ်ရှင် ၅၀ ကျော် ကိုစီစဉ် ရန်နှင့် အာကာသယာဉ် ၁၄၀ ကျော်ကို လွှတ်တင် ရန်စီစဉ် နေ ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ်နှစ် ပတ်လုံး အာကာသ စီမံကိန်းသည် Tianhe ၏အဓိက ဆေးတောင့် ကို ထိန်းချုပ်ရေး စင်တာ အဖြစ် နှင့် Wentian နှင့် Mengtian စမ်းသပ် ဆေးတောင့် များ ကိုအဓိက စမ်းသပ် ပလက်ဖောင်း အဖြစ် လွှတ်တင် ရေး မစ်ရှင် ခြောက် ခု ကိုအကောင်အထည်ဖော် မည်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ် ပတ်လုံး ဂရုစိုက် သော အာကာသ စခန်း သည် အပြည့်အဝ ပြီးစီး မည်ဖြစ်ပြီး Long March 6A ပစ်လွှတ် သည့် ယာဉ် နှင့် အမျိုးမျိုးသော စီးပွားဖြစ် ပစ်လွှတ် သည့် ယာဉ် သည် ပထမဆုံးအကြိမ် ပျံသန်း လိမ့်မည်။